Impahla Ready for zokuthunyelwa
Round Icandelo Pipe
Icandelo Square & okoxande Wosenza
Ranpu Metal olunzulu izinto zokwakha umenzi benza uphando, uphuhliso, imveliso, intengiso kunye nenkonzo zonke iintlobo banikwe, ezifana formwork sentsimbi, izixhaso shoring, ifreyim banikwe njl Okwangoku, sinako kubonelela imibhobho ezahlukeneyo intsimbi, ezifana njengoko banikwe tube, umbhobho kwalenza njl
Ingakumbi, ngowe-2016, ubuchwepheshe bethu welding yavunywa yi isatifikethi AWS. Sinako nikeza inkonzo OEM ngokwendlela imizobo yenu. Iqela lethu imveliso lungayilwa formwork kwaye unike ingcebiso malunga iiprojekthi zakho.
Umgangatho kunye nokhuseleko kwakha ikamva Kuyinkolelo yethu, ngoku iimveliso zethu uye ngokubanzi wathengisa kumazwe angaphezu kwama-30 eYurophu, eMelika, eAsia, Australia nase-Afrika.
Sebenza kunye nathi, uya kufumana inkonzo ebalaseleyo olunye-ikuthintele kulo izigaba lonke iiprojekthi zakho, ukususela uhlahlo lwabiwo-mali ekupheleni. We akuncede ekucwangciseni kangangoko zobugcisa, Ukuze eyihlangula, on-site iliso, kwaye ngaphezu kwezi bahlwise.
Asiyi kuqinisekisa iinzuzo zoqoqosho ngokuxhaphaza yomgangatho!
Ngokusekelwe kumava yethu kurhwebo lwethu, isebe lethu namazwe angaphandle, Ranpu (Tianjin) International Trade Co., Ltd. unikeze ezinye iimveliso ezifanelekileyo, ezifana Steel Ikhoyili, Steel Sheet, C steel njl
Ranpu ulwela ukuba wonke ebanzi izinto zokwakha umququzeleli kunye kukhuphiswano kwiklasi yokuqala kunye nempembelelo, ukwenza,, ihlabathi ekhuselekileyo kakuhle nombulelo ngazo zonke abakhi kolu shishino.
Incence zophahla Sheet ku Gambia
Isefu Ikhoyili eGeorgia
Greenhouse Pipe eKorea
Idilesi: Weisan Road, Songmen Industrial Zone, Wuqiao, Cangzhou City, Hebei kwiPhondo, China